Imali engenayo yezokuvakasha yowama-2021 engaphansi kwengxenye yamazinga wangaphambi kobhadane
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Imali engenayo yezokuvakasha yowama-2021 engaphansi kwengxenye yamazinga wangaphambi kobhadane
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-Caribbean • Ukuhamba ngesikebhe • Amasiko • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Zokunethezeka • emihlanganweni • Izindaba • Ukuhamba Kwezitimela • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Shopping • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Imali engenayo yezokuvakasha kanye nezokuvakasha kulindeleke ukuthi ifinyelele ku- $ 385 billion kuphela ngonyaka ka-2021, ngaphansi kwamazinga angaphambi kwesigamu ama-pre-COVID-19.
Ubhadane lwe-COVID-19 lubangele ukusikwa okukhulu kwemakethe emlandweni.
Imithetho yeLockdown yokunqanda ukusakazeka kwaleli gciwane, yaholela ezinkulungwaneni zamaholide akhanseliwe, namahhotela avaliwe.
Imali elahlekile isiyonke emakethe yezokuvakasha nezokuvakasha kulindeleke ukuthi ibonwe kulo nyaka inkulu kakhulu.
Amazwe emhlabeni wonke aseqalile ukulungiselela ihlobo lowama-2021 ekuqaleni konyaka ukuvuselela uhambo oluya endaweni yawo futhi lwenze izivakashi zikwazi ukuvakasha ziphephile.
Ukuvalwa okuphelele ezinyangeni zokuqala zika-2021, ukukhuphuka kwamandla okuhlola, nokuvinjelwa okuphelele kokufika okungadingekile, ikakhulukazi okuvela emazweni anokuguquka kwamagciwane, konke kube yingxenye yale mizamo. Kodwa-ke, bekunganele ngokwanele ukumisa ukulahleka okwandayo okubangelwe umthelela wobhubhane ngqo kwezokuvakasha nakweminye imikhakha exhumene kakhulu nalo.
Ngokuya ngemininingwane yakamuva yemboni, imali engenayo yezokuvakasha kanye nezokuvakasha kulindeleke ukuthi ifinyelele ku- $ 385 billion kuphela ngonyaka ka-2021, ngaphansi kwamazinga angaphambi kwesigamu ama-pre-COVID-19.
Imboni Yezikebhe Nezamahhotela i-Hit Ebi Kakhulu, Izimali Ezihlanganisiwe Ezifakwe ngama- $ 258 Izigidigidi
I-COVID-19 idale ukusonteka okukhulu emakethe emlandweni, njengoba amazwe emhlabeni wonke ebeka imithetho yokuvala ukunqanda ukusabalala kwegciwane, okuholele ezinkulungwaneni zamaholide akhanseliwe, namahhotela avaliwe. Yize iningi labo lisuse imikhawulo yokuhamba futhi lavula kabusha isizini yasehlobo ka-2021, ukulahleka okuphelele kwemali engenayo le makethe kulindeleke ukuthi ibonwe kulo nyaka kusekukhulu kakhulu.
Ku-2020, imali engenayo yomkhakha wonke yehle cishe ngama-60% YoY yaya ku- $ 298.5 billion, iveze imininingwane yakamuva. Yize lesi sibalo kulindeleke ukuthi sikhule cishe ngama-30% siye kuma- $ 385.8 billion ngo-2021, lokho kusengaphansi kwama- $ 351 billion ngaphansi kuka- bhubhane.
The imboni yezokuhamba uhlala umkhakha oshayeke kakhulu emakethe yezokuvakasha kanye nezokuvakasha emhlabeni jikelele. Ngo-2021, imali engenayo yemikhumbi yomhlaba isethwe ukuthi ifinyelele ku- $ 6.6 billion kuphela, noma ngaphansi kuka-76% kunango-2019. Imboni yehhotela ilandela ngemali engenayo engama- $ 132.3 billion bese kwehla u-64% eminyakeni emibili. Yize izigidi zabavakashi zinqume ukuya eholidini ngenkathi ka-2021, izibalo zikhomba ukuthi imali engenayo ehlangene yale mikhakha yomibili izohlala ingama- $ 258 billion ngaphansi kwamazinga wangaphambi kobhadane.